Football Khabar » ग्रीजम्यानको ट्रान्सफरमा ‘प्रतिबन्ध’ लाग्न सक्ने !
ग्रीजम्यानको ट्रान्सफरमा ‘प्रतिबन्ध’ लाग्न सक्ने !
एजेन्सी, साउन ८
महत्त्वकांक्षी योजनासाथ फ्रेन्च फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यान अनुबन्ध गरेको स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालाई ठूलो झट्का लाग्ने खतरा बढेको छ । स्पेनको घरेलु लिग ला लिगाले ग्रीजम्यानको सरुवामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने ला लिगाका अध्यक्ष स्वयंले बताएका छन् ।
बार्सिलोनाले दुई साताअघि लिग प्रीतस्पर्धी क्लब एथ्लेटिको मड्रिडबाट ग्रीजम्यानलाई १२० मिलियन युरोमा अनुबन्ध गरेको थियो । बार्सिलोनाले ग्रीजम्यानको रिलिज क्लज बराबरको रकम ला लिगाको कार्यालयमा ग्रीजम्यानका वकिलमार्फत् जम्मा गराएर सामाजिक सन्जालबाट एक पक्षीय रूपमा खेलाडी अनुबन्धको घोषणा गरेको थियो ।
तर, त्यसको केहीबेरमै एथ्लेटिकोले अफिसियल रूपमा विज्ञप्ति निकालेर बार्सिलोनाले ‘धोकापूर्ण’ अवस्थाबाट आफ्ना खेलाडी लगेको भन्दै थप रकम माग गरेको थियो । उसले ग्रीजम्यानका लागि बार्सिलोनाले जम्मा गरेको १२० मिलियन युरो कम भएको भन्दै २०० मिलियन रकमको माग गरेको थियो ।
गत जुलाई १ मा दुई क्लबबीच ग्रीजम्यानको रिलिज क्लज २०० मिलियनबाट १२० मा झार्ने समझदारी बने पनि खेलाडी किनबचेमा दुई क्लबको समझदारीबाट मात्रै गर्ने सहमति बनेकोमा बार्सिलोनाले एकपक्षीय रूपमा आफ्ना खेलाडी भित्र्याएको भन्दै एथ्लेटिकोले कडा आपत्ति जनाएको थियो ।
त्यसको केहीदिनपछि बार्सिलोनाबाट २०० मिलियन (थप ८० मिलियन) माग गर्दै एथ्लेटिकोले स्पेनिस घरेलु लिग ला लिगा र स्पेनिस फुटबल संघमा मुद्दा हालेको थियो । हाल ला लिगाले सो विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । एथ्लेटिकोले ला लिगाबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नपाए फिफामा बार्सिलोनाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने बताइसकेको छ ।
स्पेनिस मिडियाका अनुसार ला लिगाका अध्यक्ष जाभिर टेबासले एथ्लेटिकोले हालेको मुद्दामा गम्भीर छानबिन चलिरहेको बताउँदै चाँडै निर्णय आउने बताएका छन् । उनले एथ्लेटिकोले प्रमाणसहित बार्सिलोनाविरुद्ध उजुरी गरेकाले हालकै अवस्थामा अनुसन्धान अघि बढी ग्रीजम्यानको सरुवामा ‘प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने’ बताएका छन् ।
‘धेरै कुरा अनुसन्धानक्रममा छन् । तर, त्यहाँ खेलाडीको सरुवामा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने सम्भावना र बाटा देखिएका छन्,’ टेबासले भनेका छन्, ‘यदि कुनै पक्ष मर्कामा परेको भए न्याय हुनेछ ।’
यदि छानबिनमा दोषी साबित भए बार्सिलोनामाथि खेलाडी अनुबन्ध गर्दा नियम तोडेकोमा सीमित अवधिका लागि प्रतिबन्ध लाग्न सक्नेछ भने आर्थिक जरिमानासमेत हुनेछ । त्यो बेला ला लिगाले ग्रीजम्यानको सरुवा रोक्नेछ ।
ला लिगाले आफ्नो छानबिन टुंगाएर स्पेनिस फुटबल संघलाई अन्तिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि संघले अन्तिम निर्णय लिनेछ । कतिपय अवस्थामा विषय र कारबाहीको अवस्था हेरी ला लिगा मात्रैले पनि निर्णय गर्न पाउनेछ ।
प्रकाशित मिति ८ श्रावण २०७६, बुधबार ०९:११